गृहमन्त्री “बादल” अबपनि सरकारमा बसिरहनुकाे कुनै औचित्य छैन ! « Media for all across the globe
गृहमन्त्री “बादल” अबपनि सरकारमा बसिरहनुकाे कुनै औचित्य छैन !
सरकार जिम्मेवार मन्त्री (गृहमन्त्री) रामबहादुर थापा (बादल) को बयान अमेरिकामा पनि रंग विभेद छ – भन्नू कतै रुकुम घटनाको समर्थन होकि (जिज्ञासा)? नेपालमा विभेद हुनु कुन ठूलो कुरो हो र भन्ने भनाई कत्तिको उचित हो? उहाँको व्यक्तिगत बयान हाे या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा सरकारको अाधिकारीक बयान हो – स्पष्ट हुनुपर्दछ?
गृहमन्त्रीज्यू तपाईंले दलित नरसंहार पुर्वनियोजित घटना हैन भन्न खोजेको होकि? व्यक्तिगत बयान हो भने अनिच्छा भएको व्यक्तीले यत्रो ठूलो पदमा बस्नु औचित्य छैन। नेकपा पार्टीले गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत बयान हो भनेर अझैसम्म अाधिकारीक रुपमा खण्डन नगर्नु सरकार यस् घटनालाई अलमलमा पार्न खोजेको अाशंक गर्न सकिन्छ?
नेकपाको पार्टी सदस्य वडाध्यक्ष डम्बर मल्ललाई निर्दोष गर्दै पार्टीको छवि बनाउने तर्फ सरकार देखियो। यस् घटनाको हरेक दोषीले सजाय पाउनुपर्छ। गाउँले रमितेलाई थुनामा लिनुभन्दा डम्बर मल्ल हिरासतमा हुनुपर्ने हो। सम्बन्धित मन्त्रालयका नेताहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने हो। निर्दोषले सजाय नपाउने अनुसन्धान होस्। हुललाई थुनामा राखेर मुद्दा कमजोर नगरियोस्।
याेजनाकार र मुख्य दोषी हुलबाट खोजौं। हुलमा सबैले मारेन तर मर्ने चोट कसको हातबाट लाग्यो अनुसन्धान होस्। मार्ने व्यक्ती, षड्यन्त्र गर्ने व्यक्ती, अगुवाई गर्ने व्यक्ति मुख्य अभियुक्त हुनुपर्छ। बाघको शिकार गर्नेबेला शिकारी सबै हुल हुदैनन् एउटा दुईवटा मात्र हुन्छन् असल पारदर्शी अनुसंधानले देखाउला।
दोषीभित्र मुख्य दोषीकाे खोजी होस्। न्यायपालिकामा एक घटनाको सबै दोषीले एक सरह सजाय नपाउनु के रहेछ? सबैको घटनामा अलग्गै पात्र हुन्छ। कहिले रमितेपनि थुनामा आउन्छन। सुष्मा (नवराजकी प्रेमिका) अनि सुष्माकी आमाले फोन गरेर बोलाउनु भयो भनेर अभियुक्त हुदैनन्। यस् घटनामा यिनी दुवै कत्तिको संलग्न छन् यसमा सजाय निर्भर हुन्छ छानबिन होस्।
आमालाई सुष्मालाई जन्माएको आधारमा दोषी बनाएको अनुसन्धानको असल तरिका हैन। जनआक्रोश छ तर न्याय अनुसंधान पारदर्शीता भएर सजाय निर्धारित गरौं।
साफ नियत सही तरिका हो भने न्याय पाइनेछ। असल न्याय यिनी मध्ये मुख्य हत्यारा सहित षड्यन्त्र गर्ने संरक्षण गर्नेले पायो भने हुनेछ।
दोस्रो न्याय चुनावमा यिनी कमाउनिष्ट, कांग्रेसी वा राजावादी, बाहुनवादी सोचका स्यालहरुलाई परास्त गरे पाउने हो। नबराज विश्वाकर्मा सहित ६ जनाको शहादतले असल न्याय पाउन…।